Xiddigaha Real Madrid ee Ronaldo, Bale, Isco iyo Asensio marka la isku daro goolasha ay dhaliyeen waxaa ka goolal badan Messi!! » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/Xiddigaha Real Madrid ee Ronaldo, Bale, Isco iyo Asensio marka la isku daro goolasha ay dhaliyeen waxaa ka goolal badan Messi!!
Xiddigaha Real Madrid ee Ronaldo, Bale, Isco iyo Asensio marka la isku daro goolasha ay dhaliyeen waxaa ka goolal badan Messi!!
Ramzi Yare January 16, 2018
Real Madrid ayaa ku jirta qaab cayaareed aad u leeta, waxaana ay fadhisaa kaalinta afaraad ee kala horreynta horyaalka La Ligaha Spain, iyadoo 19-dhibcood sare u eegeysa Barcelona oo hoggaanka u haysa horyaalka.
Kaliya ma’ahan ee Barcelona oo bandhig cajiib ah ku jira xilli cayaareedkan ay ka gacan sarreyso Real Madrid ee sidoo kale Weeraryahanka Barca ee Lionel Messi kaligiis ayaa goolal badan marka la isku daro goolasha ay xilli cayaareedkan illaa iyo hadda horyaalka u dhaliyeen Los Blancos xiddigaheeda waa weyn ee Cristiano Ronaldo, Gareth Bale Isco iyo Marco Asensio.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa xilli cayaareedkan illaa iyo hadda waxa uu kooxdiisa Barcelona u dhaliyey 17-gool oo horyaalka La Ligaha Spain ah.
Taasi waxa ay ka badan tahay isku dar goolasha ay horyaalka ka dhaliyeen illaa iyo hadda xiddigaha Real Madrid ee Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Isco iyo Marco Asensio.
Ronaldo, Bale, Isco iyo Asensio ayaa dhammaantood kooxda Real Madrid xilli cayaareedkan midkiiba uu u dhaliyey 4 gool, marka goolashaas min afarta ah oo ay dhaliyeen la isku darana waxa ay noqonaysaa 16 gool, oo Messi ayaa hal gool dheer afartooda
LAYAAB: Real Madrid inay soo qabato Barcelona waxaa uga dhow inay hoos ugu dhacdo heerka 2-aad!!!
“Haddii ay 19 dhibcood naga sarreyn laheyd Real Madrid, dadka magaalada Barcelona ayaa ina dili lahaa”